Heart Museum: ၀ိရောဓိ
ပစ္စုပ္ပန်မှာ ဘာလုပ်နေမှန်းကို မသိတော့ဘူး။
ဖြစ်ချင်တာနဲ့ ဖြစ်သင့်တာ ပဋိပက္ခဖြစ်
***ထုံစံအတိုင်း မရွှန်းမှီရဲ့ အချိန်နှင့်အမျှ ကို ညွှန်းပါတယ်။
Posted by Heartmuseum at 11:17 PM
လက်ပန်းတော့မကျဘူး ခြေထောက်တွေတော့ နာနေပြီးး ဒီမှာပဲ နားလိုက်ရကောင်းမလားလို့မဖြစ်သေးပါဘူးး ဒါနဲ့(၃၅) နှစ်က ဘယ်သူပြည့်မှာလဲ တော်တော် အိုနေပြီပဲ :)
Happy belate birthday Heart.. Cbox ka bae yawk twar le? haveagood day.
ကို HEART ကြီးးးးးးး ဆီပုံး တွေ့ဘူးကော.......
table no.4 မှာချိန်းပွဲရှိတယ်....ဟီးးးးးးးး
How can I contact u Mr. Heart museum?
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ ။ နေကောင်းပါစ... အော်စရာနေရာမရှိတော့။ တွေ့တဲ့ ပို့စ်အောက်မှာပဲ ပွတ်ထားရစ်တယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...
ခုမှ ၀ိရောဓိ ကို သေချာ ကြည့်မိတယ်.. ။ (၀န်ခံတာ)
အားမလျှော့နဲ့ .. အားပေးနေပါတယ် ..
အစစ အဆင်ပြေပါစေ ..
မင်္ဂလာပါ ကိုဟ။ နေကောင်းသလား ဗျို့.. စာမလာ သတင်းမကြား ဘာတွေ လုပ်နေသလဲ၊ ပြောင်းလဲသွားတာတော့ အမှန်ပဲ။ အင်းလေ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့။ သတိရလို့ လာလည်သွားပါတယ်။ ရွှင်လန်းချမ်းမြေ့ပါစေ...